Famonoana olona tsy fantatra - Patch 7.3.5 - Torolàlana PVE | DPS, Torolàlana momba ny lalao, Legiona, Rogues | WoW Guides | WoW Guides
Famonoana olona tsy fantatra - Patch 7.3.5 - Torolàlana PVE
Sofia Vigo | | DPS, Game Guide, Legiona, Rogues
Salama daholo. Manohy amin'ireo andiana torolàlana izay ataoko, anio dia mitondra anao ilay momba ny famonoana an'i Rogue aho. Hodinihiko ao ny momba ny fahaiza-manao, talenta, famosaviana ary ny hafa, ilaina mba hahafahany mahazo bebe kokoa amin'ny rogues sy ny fahaizany.
Matetika i Rogues dia mandefa ny adin'izy ireo ao amin'ny aloka, manomboka amin'ny famelezana ra mihosin-dra. Amin'ny ady lava dia mampiasa fanafihana mifandimby izy ireo, voafantina tsara hanomanana ny fahavalo amin'ny kapoka farany. Tsy maintsy mitandrina manokana i Rogues rehefa mifantina ny tanjon'izy ireo mba tsy handany ny fanafihan'ny kombo, ary tokony ho fantatr'izy ireo hoe rahoviana no hiafina na handositra raha miady aminy ny ady. Ho an'ny rogues ny kaody tokana dia ny fifanarahana ary ny voninahitr'izy ireo dia vidiana volamena. Tsy misy fetran'ny feon'ny fieritreretana, miantehitra amin'ny tetika feno habibiana sy mahomby ireo mpikarama an'ady ireo. Mpamono olona sy tompon'ny halatra mahafaty, manatona ny lasibony avy any aoriana izy ireo, manindrona taova tena ilaina ary manjavona anaty aloka alohan'ny hianjera amin'ny tany ilay niharam-boina.
Matetika i Rogues dia mandefa ny adin'izy ireo ao amin'ny aloka, manomboka amin'ny famelezana ra mihosin-dra. Amin'ny ady lava dia mampiasa fanafihana mifandimby izy ireo, voafantina tsara mba hanomanana ny fahavalo amin'ny kapoka farany. Tokony hitandrina manokana i Rogues rehefa mifantina ny tanjon'izy ireo mba tsy handany ny fanafihan'ny combo azy ireo, ary tokony ho fantany hoe rahoviana no hiafina na handositra raha miady aminy ny ady.
Amin'izao fotoana izao ho an'ny specialities hafa, ho an'ny famonoana olona tsy fantatra, manana ny setrin'ny Regalia an'ny mpanenjika . Rehefa mampita singa roa amin'ity seta ity dia hahazo bonus isika ary rehefa manome ny 4 amin'izy ireo dia hanampy bonus hafa izahay. Satria misy singa enina ny ekipa dia hanana safidy isika hisafidy ny iray mety indrindra amintsika, hahazoana ny bonus amin'ireo ampahany efatra. Matetika ny fananana ireo sombin-javatra efatra vita amin'ny fitaovana dia hanatsara ny lalao satria manararaotra feno ny bonus napetraka isika.
Vest an'ny mpanenjika mahery
Saron-tànan'ny olona tsy mahomby
Hidalgo satroka amin'ny scoundrel mandingana
Pataloha ilay mandroba
Ny sorok'ilay mpanenjika mahery
Bonus omena antsika ity seta ity:
Fizarana 2: Rehefa mampiasa Poizina ianao, ny poizina mahafaty sy ny poizina mandratra dia manana tombony mitombo 35% hitokona amin'ny 6 seg.
Fizarana 4: Rehefa mamono ny tanjona kendrena ny poizina mahafaty na ny poizina mahafaty dia manana 100% ny fahazoana 3. ny angovo.
Tsy nisy fiovana ny fahaizan'ilay Rogue Assassin.
Avelako ho anao ny fananganana talenta ampiasako ao amin'ny Antorus, ilay seza fiandrianana may noho ny famonoana olona novonoiko, natokana ho an'ny poizina. Na izany na tsy izany ary araka ny nolazaiko taminao tany amin'ireo mpitari-dàlana hafa, amin'izao fotoana izao dia manamora ny fahafahantsika manova talenta arakaraka ny sefo hatrehintsika isika, koa raha tsy tianao ny iray amin'izy ireo, azonao atao ny manandrana amin'ny olona heverinao fa mahavita zavatra tsara kokoa.
15 level: Mpapoizina master
30 level: Mpihazakazaka amin'ny alina
45 level: Fahavitrihana
60 level: Fahafatesana maty
75 level: Thug
90 level: Ravina misy poizina
100 level: Fiampangana poizina
Tompon'ny fanapoizinana: Ampitomboina 30% ny simba ateraky ny poizinao ary ny vokany izay tsy mahatratra 20% ny fahasimbana.
Fandaharam-potoana: Ny fihetsikao farany dia mampitombo ny fahasimbana atrehana 12% mandritra ny 5 seg.
Mandeha ra: Manimba ratra mandeha amin'ny ratra amin'ny tanjona kendrena, mitondra 100%. fahasimbana ara-batana ary mampitombo ny fahasimban'ny ra amin'ny fahaizanao amin'ny tanjona 25% mandritra ny 20 seg. Loka 1 p. combo
Nisafidy ny Tompon'ny fanapoizinana satria miasa tsara amin'ny tompony.
Stalker amin'ny alina: Raha mazoto i Stealth dia mandroso 20% haingana ianao ary miatrika fahasimbana 50% bebe kokoa ny fahaizanao.
hafetsena ihany: Ny fahaizanao mitaky halatra dia azo ampiasaina hatrany amin'ny 3 seg aorian'ny fivoahana mangalatra. Mahatonga an'i Cudgel hiatrika fahasimbana 125% bebe kokoa ihany koa ary tsy manana cooldown raha ampiasaina raha mangalatra na 3 seg aorian'ny fivoahana ny halatra.
Fifantohana amin'ny aloka: Ny vidin'ny fahaizana dia 75% latsaka ny angovo raha mbola miasa kosa i Stealth.
Nifidy aho Stalker amin'ny alina, mba hanararaotana ny fivezivezena atolotra ahy sy ny fitomboan'ny fahasimbana. Io ihany koa no safidy tsara indrindra raha manana ny sanganasa efatra amin'ny Attire of the dashing scoundrel isika. Amin'ny fivoriana sasantsasany dia azontsika ampiasaina koa hafetsena ihany, na dia matetika aza no ampiasaiko kokoa handehanako any amin'ny tranomaizina na hanao iraka.
Tetikasa lalina: Afaka manana 6 p farafaharatsiny ianao. combo, ary ny famaranana anao dia mandany 6 be indrindra. combo ary miatrika fahasimbana 5% bebe kokoa.
mialoha: Afaka manana hatramin'ny 10 p. combo Ireo mpamitana dia mbola mandany isa 5 be indrindra. combo
hery: Mampitombo ny herinao avo lenta amin'ny 50. ary ny famerenanao angovo 10%.
Tamin'ity indray mitoraka ity no nofidiko hery satria manome fahafaha-milalao ahy be dia be izany mandritra ny lalao. Afaka misafidy ihany koa ianao Tetikasa lalina, na dia mifototra amin'ny fananganana poizina aza dia aleoko hery. Azonao atao ny manandrana mijery hoe iza amin'ireo no ahatsapanao fa tsara kokoa.
Poizina parasy: Mandrakotra ny fitaovam-piadianao amin'ny poizina tsy mahafaty maharitra 1 ora, manome anao famerenana 10%.
Elusion: Ny Feint dia mampihena ny fahavoazana rehetra alainao amin'ny fanafihana tsy misy vokany 30% mandritra ny 5 seg.
Fahafatesana maty: Ny fanafihana mahafaty dia mampihena ny fahasalamanao ho 7% amin'ny fahasalamanao lehibe indrindra fa tsy mamono anao. Ho an'ny 3 seg manaraka, dia mandray fahasimbana 85% ianao. Tsy azo alefa mihoatra ny indray mandeha isaky ny 6 min.
Nifidy aho Fahafatesana maty satria fiantohana amin'ny toe-javatra sasany io ary heveriko ho ny tsara indrindra amin'ireo telo ireo amin'ny ankamaroan'ny lalao.
mpihetraketraka: Mamerina ny cooldown sisa tavela ao Cudgel rehefa maty ny lasibatra miaraka amin'ny mavitrika Cudgel anao.
Fanararaotana ireo malemy: Ny fahavalo tsy afa-manoatra amin'ny fitokonanao voa, ny fitokonana mora vidy, na ny bazy dia mahazo fahasimbana fanampiny 10% amin'ny loharano rehetra
Ra mandeha ra: Ny fitokonana amin'ny voa ihany koa dia mifampiraharaha (144% amin'ny herin'ny fanafihana). simba ny rà isaky ny teboka combo mandritra ny 12 seg.
Tamin'ity tranga ity dia nisafidy aho mpihetraketraka, fa amin'ny fihaonana sasany ary amin'ny fotoana sasany dia miova ho Fanararaotana ireo malemy safidy tena tsara io.
Ravina misy poizina: Atsaharo amin'ny fahavalo misy poizina ny fahavalo, simbaina 600%. Fahasimban'ny natiora. Ny fahasimbana ateraky ny poizinao amin'ny lasibatra dia nitombo 35% ho an'ny 9 seg. Loka 1 p. combo
fahavononana: Ny fivezivezenao dia manana 20 + (20 * ComboPoints)% vintana isaky ny teboka kombo hanomezana maimaika 2% mandritra ny 20 seg. Mitsivalana hatramin'ny in-10.
Mivoaka rà: Atsipazo ireo ratra kendrenao ny lelanao, ary miteraka 150% haingana kokoa ny vokanao ra.
Ravina misy poizina Ny talenta no nofidiko tamin'ity indray mitoraka ity satria amiko io no tsara indrindra amin'ny fananganana talenta miompana amin'ny poizina satria mampitombo ny fahasimban'ireto.
Fiampangana poizina: Manome ny ratra voapoizina 3. angovo fanampiny isaky ny manome angovo.
Voamarika fa ho faty: Manamarika ny kendrena, miteraka 5 avy hatrany. combo Mamerina i Cooldown raha maty ao anatin'ny 1 minitra ny tanjona
Taranaky ny fahafatesanaMpamaritra amin'ny teny finoa Kitiho ary mifampiraharaha hatramin'ny (440% amin'ny herin'ny fanafihana). fahasimban'ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 8 metatra. Avy eo ianao dia mitsambikina miakatra ary rehefa midina ianao dia mampiasa Poison hanohitra ilay kendrena amin'ny hery toy izany izay misy vokany mahery vaika 50%.
Tamin'ity indray mitoraka ity no nofidiko Fiampangana poizina fa ny safidy tsara indrindra hatrizay Voamarika fa ho faty Ampiasaiko matetika ho an'ny haavo sy Taranaky ny fahafatesana Tsy hitako fa mety amin'ny famonoana olona io.
Fifehezana> Fitokonana mitsikera> Fahavoa-toetra> Hainganana
Enchant Cloak - Famatorana ny fahaizany mandanjalanja: Famosaviana akanjo fotsy maharitra mba hampitomboana ny fahaizan'ny 200.
Peratra Enchant - Famatorana ny fifehezana: Enchant maharitra ny peratra hampitomboana ny fifehezana 200
Potion ny hery maharitra: Misotroa mba hampitomboana ny statut rehetra amin'ny taona 2500. mandritra ny 1 min. (Cooldown 1 Min)
Loharanon'ny sakafo matsiro an'ny zazakely: Mamerina amin'ny laoniny 200000 p. fahasalamana sy 400000 20 p. mana mihoatra ny 10 seg. Tsy maintsy mipetraka foana ianao rehefa misakafo. Raha mandany farafahakeliny 375 segondra fihinanana ianao dia ho voky tsara ary hahazo 1. mari-pahaizana master mandritra ny XNUMX ora.
Mrglgagh an'i barracuda: Mamerina amin'ny laoniny 200000 p. fahasalamana sy 400000 20 p. mana mihoatra ny 10 seg. Tsy maintsy mipetraka foana ianao rehefa misakafo. Raha mandany farafahakeliny 300 segondra fihinanana ianao dia ho voky tena ary hahazo 1. mari-pahaizana master mandritra ny XNUMX ora.
Tafio-drivotra anaty tafio-drivotra: Mamerina amin'ny laoniny 200000 p. fahasalamana sy 400000 20 p. mana mihoatra ny 10 seg. Tsy maintsy mipetraka foana ianao rehefa misakafo. Raha mandany farafahakeliny 225 segondra fihinanana ianao dia ho voky tena ary hahazo 1. mari-pahaizana master mandritra ny XNUMX ora.
Fetibe mahomby: Manomàna fety mahafa-po hamelomana olona 35 amin'ny tarika na fety misy anao! Mamerina amin'ny taona 200000 p. fahasalamana sy 400000 20 p. mana mihoatra ny 10 seg. Tsy maintsy mipetraka foana ianao rehefa misakafo. Raha mandany farafahakeliny 300 segondra fihinanana ianao dia ho voky tena ary hahazo 1. ny statistika mandritra ny XNUMX ora.
lohany Hidalgo satroka amin'ny scoundrel mandingana Aggramar
vozony Vatoky ny lelafo tsy misy F'harg
-tsorony Mantle an'ny Master Assassin malaza
sosona Fitafiam-bahoaka ratsy Amiraly Svirax
tratra Vest an'ny mpanenjika mahery Eonar
saribakoly Zoldyck Family Training Shackles malaza
manos Fangejana tafahoatra Fivoriambe Shivarra
andilany Fehikibo mpiandry vavahady hasabel
tongotra Pataloha ilay mandroba Imonar
Pies Mamoaka afo F'harg
Tady 1 Tarika Mpanefy Sargerita Kin'garoth
Tady 2 Tombo-kasen'ilay Pantheon voaloto Argus the Annihilator
Trinket 1 Fangia mandoro ala F'harg
Trinket 2 Ny tanjaky ny Golganeth Argus the Annihilator
Shadow Relic Siny menaka Kin'garoth Kin'garoth
Relika vy Fesin'ny legiona tsy manam-petra Amiraly Svirax
*Amin'ny fihaonana maro dia mampiasa ity trinket manaraka ity koa aho: Maso filaminana
Use Poizina mety maty y Poizina mandringa amin'ny fitaovam-piadianao. Miezaha mampiasa Poizina mandringa raha te hampiadana ny fahavalo sasany isika, satria raha tsy hofehezintsika izany, rehefa mampiasa Mpankafy antsy Afaka mampiadana ny fahavalo izay tsy tadiavintsika isika.
Use Fialana tanjona telo.
Use Bane of Kings rehefa azonao omena.
Use Ravina misy poizina raha mbola misy izany.
Hampiasa izahay poizina rehefa manana teboka combo 4 na 5 izahay.
Tsy maintsy mitazona isika Club amin'ny lasibatra voalohany.
Usar maima mandritra ny ady mba hiteraka teboka combo.
Hampiasa izahay Mpankafy antsy rehefa manana fahavalo roa na maromaro isika ary hanampy antsika hiteraka isa combo ihany koa izany.
Afaka mampiasa isika hanjavona Raha mbola hitantsika fa ilaina izany ary manana teboka combo 5 izahay.
Usar NAMPITAHOTRA hampihenana ny simba
Evasion Ho mora azo izany raha misy antony mandritra ny fihaonana dia mila manafatra ny sefo mandritra ny segondra vitsy isika.
Tavoahangy mena "tifitra" fiainana tsara izany isaky ny maika isika.
Hatramin'ny manaraka ry zalahy. Manantena aho fa miaraka amin'ity torolàlana kely ity dia hamporisihina ianao hilalao amin'ny rogue / famonoana olona, ​​ianareo izay mbola tsy nanao izany. Mandrapihaona amin'ny Azeroth!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Famonoana olona tsy fantatra - Patch 7.3.5 - Torolàlana PVE
Paladin famerenam-bidy - Guides PVE - Patch 7.3.5
Sarivongan'i Mortojo Kilrogg mahavariana